2020 Masters Tournament: Ixesha kunye neNgcaciso yolwazi
I-Masters yenye yeyona ntshatsheli ebalulekileyo yegalufa yamadoda. Kwaye njengoko kunjalo, i-2020 Masters Tournament iya kudlala ngo-Epreli kwimeko yaseGeorgia. Nazi ezinye iinkcukacha:
Imihla: Epreli 9-12, 2020
Indawo: I- Augusta National Golf Club e-Augusta, Ga.
Njengoko abafundi bayazi ngokuqinisekileyo, u-Augusta kaZwelonke yenye yezona zifundo eziphambili kunye nezona ziqhankqalazo ezidumile emhlabeni. Iprofayili yethu ye-Augusta kaZwelonke ifaka izinto ezinjengokutyelelwa kweendawo eziqingqiweyo zelizwe laseAugusta kunye neenkcazo zendlela Amamandla Amacandelo afumana ngayo igama layo .
Amathikiti kuma-Masters 2020
I-Masters enye yeekitikiti ezikhuni ukufumana phakathi kwazo zonke imicimbi yezemidlalo. Indlela kuphela yokufumana amathikiti ngokuthe ngqo kwi-Masters / Augusta kaZwelonke ngokwayo ithatha inxaxheba kwiteyiti yonyaka ithikithi. Iikiti zithengisa ithikithi, ngokusebenzisa umzobo ongenanto, ukuqhuba iintsuku; likwazisa kwakhona inani elincinci lemihla yokuhamba. Ngaphandle kwaloo nto, abathengi bethikiti banokubethelwa kakuhle, kwaye ezo tikiti zibiza kakhulu. Bona inqaku elithi " Indlela yokufumana ithikithi yamaMatters " ukuze iphelele i-rundown ibandakanya imiyalelo yokuthatha inxaxheba kwithtoti yonyaka.
Iveki yeKhenketho ishedyuli ye-2020 Masters
Iiveki zemiqhubi kwiMasters ziqala ngoMvulo kunye neentsuku ezintathu zokujikeleza kunye neminye imisebenzi yemveli kunye neziganeko, ezilandelwa iintsuku ezine zokudlala, iiRounds 1-4. Nantsi ishedyuli yemihla ngemihla ye-2020 ku-Augusta National Golf Club:
NgoMvulo, nge-Epreli 6: Yenza umsebenzi wokujikeleza
NgoLwesibini, ngo-Ephreli 7: Ziqhelanise i-Round Dinner
NgoLwesithathu, ngo-Ephreli 8: Yenza umsebenzi wokujikeleza, uMqhubi we-Par-3
NgoLwesine, uEpreli 9: I-Round 1 ye-Masters
NgoLwesihlanu, ngo-Apreli 10: I-Round 2 ye-Masters, isiqendu esingama-36 emva kokuphelela komdlalo
NgoMgqibelo, ngo-Apreli 11: I-Round 3 ye-Masters
NgeCawa, ngo-Apreli 12: I-Round 4 ye-Masters, ilandelwa nguMkhosi we- Jack Jacket kunye ne- trophy presentation
Iimpawu zokufaneleka kwi-2020 Masters Golf Tournament
Kukho iindlela ezininzi abagadi begolfu abanokukwazi ukufumana isimemo sokudlala kwiMasters - iindlela ezili-18 ezahlukeneyo, eqinisweni. Ngubani ofumana iimemo kwi-2020 ye-Golf Masters? Abadlali abadibana nayo nayiphi na ididi zeziqinisekiso:
Abaphumeleleyo bamandulo be-Masters
Abaphumeleleyo kwii-5 zokugqibela zase-US bavula
Abaphumeleleyo kwiintlanu zokugqibela zaseBrithani bavula
Abaphumeleleyo kwiintlanu zokugqibela zePGA Championships
Abaphumeleleyo kwiintlabathi ezintathu zokudlala
Umninimzi kunye nomgijimi ovela kumdlalo wokugqibela wama-Amateur wase-US
Umndilili wokugqibela we-Amateur Championship
Umninimzi wokugqibela we-Asia-Pacific Pacific Amateur Championship
Umninimzi wokugqibela weLatin America Amateur Championship
Umninimzi wokugqibela we-US Mid-Amateur Championship
Abagqibeleleyo abagqibeleleyo aba-12 (kubandakanywa izibophelelo) kumqhubi weMasters wonyaka odlulileyo
Abaphengululi abaphezulu abane (kubandakanywa izibophelelo), ukususela kwi-US Open yonyaka odlulileyo
Abagqibeleleyo abane-finishers (kubandakanywa izibophelelo) ukusuka kwi-British Open yonyaka odlulileyo
Abagqibeleleyo abane abagqibeleleyo (kubandakanywa izibophelelo) kwi-PGA Championship yonyaka odlulileyo
Abaphumeleleyo bezeNdwendwe ze-PGA Tour ezinika amanqaku apheleleyo weNdebe ye-FedEx, ukusuka kwixesha leMasters zangaphambili ukuya kwiiMasters zangoku
Bonke abagadi begalufu abafanelekayo kwi-Tour Championship yonyaka odlulileyo
I-50 abagadi beGrafti ephezulu kwiGosa leGosa leGosa leGosa leGosa eliPhezulu lonyaka wekhalenda wangaphambili
Abadlali abaphezulu beGraf 50 kwiGosa eliPhethe leGalofu yeGalofu ukusuka kwiveki phambi koMasters
Ukongezelela, iKomiti yeMasters inokuthi, ngokwengqiqo yayo, bamema abadlali bamazwe ngamazwe abangahlangabezananga naliphi na le migaqo yokufaneleka.
Iintetho ezi-10 eziphezulu zeR Rap ziya kuthanda
Imisebenzi engcono kakhulu yeCampus Jobs